Korea: Raha nihaona ny mpitondran’i Korea Atsimo sy Avaratra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Oktobra 2007 9:35 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, English
Inona moa ny dikan’ny fihaonana faharoa eo amin’ny mpitondra Koreana Tatsimo sy Tavaratra? Lohahevitra roa no banjinina. Ny voalohany dia ny tsy fitovian-kevitra eo amin’ny Mpiserasera sy ny haino aman-jerim-pirenena. Ny lohahevitra faharoa kosa dia ny dika politika sy toe-karena ao amin’io fihaonana io.
Tsy vitsy ny mpibilaogy no manohitra ny fomba fijerin’ny ankamaroan’ny gazety mandala ny nentim-paharazana momba ilay fihaonana. Indro asehon’i Neocross izany nataon’ny gazety izany taorian’ny fihaonan’ny mpitarika roa tonta.
… Amin’ny lafiny iray dia manatantara izy ity. Na dia tsy mitovy ny tamin’ny fihaonana voalohany fony fahaprezida Kim Dae-jung aza, dia misy dikany ilay fihaonana fito taona taty aoriana.Nanakory avy moa ny nataon’ny gazety tsirairay ?…toa mitovy ihany…mazava loatra… Tsy nahoan’i Chosun.com loatra. Mety ho tsy mahatadidy tsara aho, fa fony lany ho kandida sisa tavela ho prezida i Lee Myung-bak nandresy an’i Park Geun-hye, dia navandravandra teo amin’ny pejy voalohany ny vaovao… angamba tsy zava-dehibe kokoa noho iny fandreseny iny ity fihaonan’i Korea Atsimo sy Avaratra ity.
Joins.com (siniben-tseraseran’ny gazety Joongang Newspaper) dia toa tsy mba faly loatra rehefa avy mamaky ny lohatenin-gazety ianao. Tsy misy soritr’endrika ary tsy ahitana izay tena fihetsika… haha
Mbola afa-miresaka izay tena fiantraikan’ny fihaonana any amin’ny vahoaka isika, saingy tena ilaina ve ny manapo-drano mangatsiaka dieny ety amboalohany?
Sandman dia mampitaha ny fahasamihafana nandikan’ny vaovao tao an-toerana sy ny vaovao ivelany ny fihaonana.
… Tena tafahoatra loatra. Tsy fantaro intsony hoe iza amin’ireto no haino aman-jery Koreana.Na dia ny gazety be mpividy indrindra aza dia manakiana sy miteny ratsy…Dia tena sarotra ve ny manavaka ny tsara sy ny ratsy ?Zary mamelively tsy misy fanadihadiana tsara akory, tsy mampiseho hoe inona ny mahazava-dehibe ny fihaonana eo amin’ny mpitondran’ny Koreana Tavaratra sy Tatsimo, tsy mahalala akory izay hatao ao. Tsy midika izany hoe tokony hanasohaso amin’ny tsy antony ny raharaha ry zareo.
Masiaka kokoa aza ny Sasany amin’ny mpibilaogy manohitra ny ankamaroan’ny gazety.
… MBC TV News Broadcast dia nampiseho fa Chosun, Joongang, ary Dong-a Newspapers dia namoaka fanadihadiana mandainga. Ny nolazain’izy ireo fa avy amin’ny gazety avy any ivelany dia lainga daholo. Ninia nanala teny maromaro ry zareo dia iny no natao hoe fanadihadiana nataon’ny gazety avy any ivelany.Nisy aza lahatsoratra milaza zavatra tsara no naolana hilaza zavatra hafa Jereo ity traki-tsary ity..
Manao ahoana ny fahamatorany ?
.. Tsy nahaloa-teny intsony aho.
Ity ohatra bobaka mihitsy ny lainga:
Nilaza ny vaovao avy any ivelany fa tafahoatra ny tsikera ataon’ny gazety koreana ny filoha koreana. Dia adinon’ireo gazety (koreana) ireo ny teny hoe « gazety koreana » ary ny « tsikera » ihany no teny naveriny. Dia tahaka ireny hoe ny Koreana rehetra no manakiana ny fihaonana (tsy marina izany). Hamarino ny vaovao azon’ireo avy amin’ny AP, hitako fa tsy mari-pototra ny vaovao…sns
Mbola misy maro…aza fady anie jereo ny raki-tsary. Mahatsikaiky mahasosotra ilay izy. Ny vaovao androany no nahaliana ny olona kokoa. Fa inona no nahazo ireo gazety ireo e ? Nahoana no dia mieritreri-diso tahaka izao ?
Hevi-gazety roa maka an-tendrony no tsy tian’ny mpibilaogy sasany.
…Raha nampihetsi-po antsika tokoa ny fitsidihana tany Pyongyang nataon’ny filoha Kim Dae-jung fito taona lasa izay, dia nilamindamina no sady nisy vaingany kokoa ny tamin’ity indray mitoraka ity. Raha misy fihaonana misesy manomboka izao, dia tsara kokoa raha vahana aloha ny olana mbola mihantona eo ambon’i Korea Atsimo sy Avaratra ….
Amin’ny lafiny hafa, tena misara-kevitra roa mifandrafy tokoa ny fijery ny fihaonana avy ao anatin’(i Korea Atsimo). Tsy tsara ny midera ny nataon’ny filoha ho tahaka ny manan-tantara sy fanehoam-pitiavan-tanindrazana, fa tsy tsara koa ny mitsikera ny dingana nataony mba handrava ny rindrin’ny fisarahana.
Ny antsipirihany tsirairay dia voahadihady avokoa. …
…Tena hafa noho ny tamin’ny fitsidihan’ i Kim Dae-jung mihitsy ny fihetsika nataon’i Kim Jong-il. Angamba ny akanjo tamin’ny farany ihany no nanaovany…? Fony nitsidika tany i Kim Dae-jung fito taona lasa izay, dia nifamihina ny roa tonta ary niaraka nandray fiara iray. Naharitra 50 minitra ny resaka tao anaty fiara. Fa tamin’ity indray mitoraka ity kosa tsy nifandray tanana ry zareo ary tsy niaraka nandray fiara. Raha ampitahaina ny tamin’ny fito taona lasa dia hentitra ny tarehin’i Kim Jong-il.Ny hany nataon-dry zareo tamin’ny fifankahitana voalohany dia ny teny hoe « Faly mahita anao ».
Tsy nisy fihetseham-po taratra mihitsy nataon’i Kim Jong-il nandritra ny matso miaramila sy raha nandray ny tanany Roh Moo-hyun niaraka tamin’ny mpitondra ambony hafa. Tsy niteny na inona na inona izy ary nijery ny tao ambadiky Roh Moo-hyun fotsiny. Maro no azo andikana izany zavatra izany. Iray amin’izany ny toe-pahasalaman’i Kim amin’izao fotoana izao. Mihevitra ny olona fa efa antitra izy ka efa osa. Ny hafa kosa mametraka fa tsy dia taitra loatra intsony izy satria efa fihaonana faharoa io. Nefa tiany hofehezina tsara ny fihaonana.
Efa ho tapitra ihany koa ny fe-potoana itondran’ny governemanta Roh. Na dia mampanantena zavatra maro aza izy, dia mety tsy hisy dikany intsony izany raha miova ny fitondrana.
Momba ny fihaonana kosa, Tena nanakim-po amin’io tokoa ity ranamana iray ity.
… Ny fihaonan’i Korea Atsimo sy Avaratra.Mampangovitry ny fihetseham-po…
Mafana ny foko sy ny teta-masoko…
Manontany ny Hafa hoe nahoana no amin’izao fotoana izao no mitranga io ary inona no mety ho fiantraikany amin’ny toe-karen’i Korea Atsimo ?
…Tamin’ny taona 2000, ny filoha teo aloha Kim Dae-jung, dia efa niomana ny hitsidika an’i Korea Avaratra avy eny an’habakabaka.
Ny taona 2007, Roh Moo-hyun kosa niampita nankany avaratra an-tongotra.Amin’ny hevitro manoloana io fihaonana io…tena mankasitraka ny fihaonan’ny mpitondra roa tonta aho, ho amin’ny fandriampahalemana sy ny fahavokaram-be, dingana manandanja ho amin’ny fampiraisana rahateo io.
Na izany aza,Mieritreritra aho fa tara loatra ny fanapahan-kevitra.Ho avy amin’ny volana desambra ny fifidianana ary amin’ny volana febroary ny lanonam-pametrahana ny filoha vaovao. Izany hoe efa-bolana sisa no hiasany amin’ny mahafiloha.Manantena ny filoha (Koreana Tatsimo) fa ny iray antoko aminy ihany no handresy sy hanohy ny politikany…nefa tahaka ny tsy hitranga izany fanantenana izany.
Nefa na tsy afa-manao na inona na inona intsony aza izy, dia efa mihaona amin’i Kim Jong-il aloha.
Tena tsy azoko mihitsy hoe inona no hataony amin’ny efa-bolana sisa itondrany. Tsy naleo ve tamin’ny taona 2004 no niezaka nitady fihaonana ?
Lasan’eritreritra aho fa ny tena kendrena dia ny hahazoan-tsafidy amin’ny fifidianana ho avy.…mila fandriampahalemana ny olona saingy mbola tsy vonona amin’ny fampiraisana.
Raha misy ny fampiraisana dia tsy maintsy isika (Korea atsimo) no miantoka[mizaka] ny lany amin’izany. Izany hoe tsy hitombina ny toekarena.
…Eny, ao anatin’ny fotoana maharitra dia tsy maintsy ilaintsika ihany ny fampiraisana.…saingy sarotra ny handà hoe ny « toekarena » no laharam-pahamehana mialoha ny « fandriampahalemana »
…Misy koa ny eritreritra hafa, politikam-pampiraisana miompana amin’ny fifampiankinan’ny toekarena aloha.
….Ny fototry ny fandraharahana manerantany.Andeha hojerentsika hoe ahoana no hiatrehana ny fandraharahana iraisam-pirenena.
Ny voalohany dia ny fahafaha-manandran-tsiro.
Rehefa zatra manandrana tsiro ny olona dia lasa mpanjifa. Dia tahaka izany koa eto.
Moa zava-baovao mbola tsy fahita ve ity fihaonana ity ?Jereo Japana.Nandany vola tamin’ny firenena nanerana an’i Azia Atsimo atsinanana i Japana.
Ankehitriny, efa nody ventiny ny rano natsakain’i Japana, efa miverina any aminy ihany ny vola nolaniana.
Nampialona ahy mihitsy ny “teti-mpandraharahana vitany (japana)”.
Raha jerena ny fifandraisana misy eo amin’ny Korea Avaratra sy Atsimo…ny azontsika atao manambatra ny firenena ka ny Atsimo no mitarika azy.
Tokony hanome betsaka an’i Korea Avaratra isika mba hampisandratra an’i Korea Atsimo.
Afaka taona vitsivitsy any dia ho hitantsika fa tsy ho afaka hijoro mahaleo tena tsy misy an’i Korea atsimo i Korea Avaratra.
Tokony hanao bebe kokoa isika mba hampanandrana tsiron-tantely an’i Korea Avaratra.
Tanindrazan’iza moa I Korea Avaratra?
Iza no mponina any Korea Avaratra?
Mpiray tanindrazana amintsika ihany ireo.
Andeha isika hiaramanasoa ny tanin’ny mpiray tanindrazana amintsika.
Iza no mahasahy hiditra an-tsehatra hanelingelina sy hitsara ny lalana hizorantsika?
Nahoana isika no hatahotra ny firenena matanjaka manakaiky antsika?
…Aleo miomana amin’izay mety ho fidarabohan’ i Korea Avaratra tampoka, dia mba mamefy araka izay mety ho sahotaka amin’izany fidabohana izany, fahendrena noho izany ny mampianatra an’i Korea Avaratra handroso.
Aza manantena fianjeran’i Korea Avaratra araka ny voasoratra sy ny eritreritra isan-karazany.
Andao vahana amin’ny alalan’ny toe-karena ny olana…